“ယုယ - နွေးထွေးသော ဘ၀လေးတစ်ခု”: “ခံစားမိသော ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်”
နင် ယခု မေ့ပုံလို
နင် မျှော်စမ်း နင့်ကိုယ်။
အမိုက် နင့်ပြင် ရှိသေးလေလိမ့်လား။
အလွဲ နင့်ပြင် ရှိသေးလေလိမ့်လား။
အရှုံး နင့်ပြင် ရှိသေးလေလိမ့်လား။ (လယ်တီ ဆရာတော်)
ကျွန်တော်တို့ အထက်တန်းကျောင်းသားဘ၀က သင်ခဲ့ရတဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ မထင်မှတ်ပဲ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ဂျာနယ်တစ်စောင်မှာ ပြန်ဖတ်မိတာကြောင့် သတိရပြီး ရေးဖြစ်သွားတာပါ။
ဒီကဗျာလေးကို အင်မတန် ကြိုက်နှစ်သက်လို့ ဘာသာပြန်ဖို့ ကြိုးစားတာ ၅ ရက်လောက်ရှိသွားပါပြီ။ ဒီနေ့မှပဲ အပြီးသတ်နိုင်လို့ တင်လိုက်တာပါ။
*အမှားပြင်ဆင်ချက်* ဟုတ်တယ် ကိုလူထွေးထောက်ပြသွားလို့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ ပေါ့ဆမှုကြောင့် ဘာသာပြန်တာ Stupid နှစ်ခါထပ်သွားရပြီး စာပိုဒ်လေးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်လေးပါ လွဲချော်သွားရသလို ဖြစ်သွားပါတယ်။
၀န်ခံချက်။ ။ ဘာသာပြန်လက်ရာလေးကို ဆရာတော်ရဲ့ ကဗျာနဲ့ ယှဉ်တွဲမဖော်ပြချင်လို့ Comment ထဲမှာ ထည့်သွင်းပေးလိုက်မိတာပါ။ အခုလို မိတ်ဆွေတွေရဲ့ အကြံပေးချက်အရ ပို့စ်ထဲမှာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
“Seize the Chance or otherwise”
Rather attached to
Five fleshy lusts
Days crept; in such your lack of cognition
Final liberation from ignorance is still too far
Amid nether worlds of zero bliss
So it is the Avici Hell
Where you are to forever live.
Foreknow well. Be wise
To keep away from the cosmic vortex
Set against Dhamma Light,
So bright is your imbecility.
Disposing of this deep-seated rapacity
Try to getacomplete change
To aim for eternal, sinless gain.
Disinclined when well-timed
Mind how stupid you are;
Vacillating when well-timed
Mind how mistaken you are;
Demoralized when well-timed
Mind how beaten you are.
(Translated in gracious homage by yu ya)
ဦးလူထွေး ထောက်ပြထားတာလေးကို mistaken လို့ ပြင်ထားပါတယ်။
Posted by Yu Ya at 10/14/2009 11:03:00 PM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
(Translated in gracious homage by ya ya)
ယခုတခါ ပြန်ဖတ်ရလို့ ၀မ်းသာပီတိဖြစ်မိပါ၏ ဘာသာပြန်ကလည်း အရမ်းကောင်းတာမို့ မှတ်သားသွားပါ၏
ဆရာလုပ်ရတာ အကျင့်ပါနေလို့ ဒီတခါလည်း ခွင့်လွှတ်ပါတော့။
Mind how foolish you are... လို့ ရေးရင်ပိုကောင်းမလားပဲ...
အမှန်တော့ ယုယဘာသာပြန်ပေးထားတာတွေ အကုန်လုံး နားမလည်ပါဘူး။
အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန်လဲ ကောင်းတယ်။သဘောကျလို့ သူးယူသွားတယ် ကိုယုယရေ... မူရင်းကော၊ ဘာသာပြန်ကော။
ကျွန်တော်ဆီ ကိုယ်ရောင်ပျောက်ဆေး လာသောက်ပါဦးလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေဗျာ။
တန်ဖိုးရှိတဲ့ ကဗျာလေးရော ဘာသာပြန်လှလှလေးရော ဖတ်သွားတယ် ကိုယုရေ....
ဘာဖြစ်လို့ ဘာသာပြန်လေးကို ပို့စ်မှာ မတင်တာလဲ။
ဆရာတော်ရဲ့ ကဗျာရော ကိုယုယရဲ့ ကဗျာကော မာန်ပါတယ်။
post မှာ တင်ပါလား။
အရမ်း နှစ်သက်ပါတယ် ..
ကျေးဇူးပါနော် ..း)
ကျေးဇူးပါနော် .. ::))
အောင်မလေး..ကိုယုယကြီးတို့ တော်ချက်.. အရမ်းတော်.. ကဗျာလေးက ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ရွတ်လာတော့ အခုလို ပြန်ဖတ်ရတဲ့အခါ အနှစ်သာရနဲ့ ပြည့်စုံပါပေတယ်..ဘာသာပြန်လေးကလည်း ကောင်းလို့ အားကျသွားပါတယ်...ကူးလိုက်မယ်နော်..
နှစ်ခုလုံးကို ကူးသွားတယ်နော် ကဗျာလေးကြိုက်လို့။
သေချာတာက မဖတ်ဖူးလို့ မမှတ်မိတာ
သူများတတွေ အင်္ဂလိပ်ကို မြန်မာဘာသာပြန်ရေးနေကြတဲ့ အခါမှာ ကိုယုယက မြန်မာကို အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာ ပြန် ရေးနိုင်စွမ်း က ... တော်ချက် ။ တချို့ စာလုံးတွေ အဓိပ္ပါယ်သေချာ မသိလို့ဒစ်ရှင်နရီ ပြန်ကြည့် လိုက်ရသေးတယ် ။ ဟဲဟဲ ...( လူကြီး ရှက်လို့ ရယ်သံ ) ၊
ဟုတ်သားဘဲ ။။ ဘာလို့ပို့ စ်နေရာ မှာ မတင်တာလဲ ။
ယှဉ်ဖတ်ရတာ .. ပိုလွယ်တာပေါ့ ကွယ် ( ဆရာ လုပ်သွားသည် ...း)
မသိတဲ့ စကားလုံးတွေ အများကြီးပဲ..
ဘာသာပြန်တာလေးကို ပို့စ်မှာ တင်ရင်ကောင်းမယ် ယုယရေ..
အားထုတ်မှုကို ချီးကျုးပါတယ်။ ဒါမျိုးတွေ လုပ်သင့်ပါတယ်။
ရင်ထဲစွဲနေတဲ့ ကဗျာလေးပါကိုယုယရေ ကိုယုယရဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်လေးက အားကျ စရာကောင်းတယ်ဗျာ ....
ခေါင်းစဉ်လေးကို ပြန်ထားပုံလေး ပိုကြိုက်တယ်။
ကဗျာကောင်းလေး ဖတ်သွားတယ် ဘာသာပြန်လဲ တတ်သလောက် ခံစားကြည့်တယ်း)
ကဗျာလေးကို သေချာ လာခံစားသွားပါတယ်။
သိပ်ကောင်းတဲ့ မျှဝေမှု့ အတွက် ကျေးဇူးပါ။
သုံးထားတဲ့ စကားလုံးတွေကတော့ အမြင့်စား.. ဒီကဗျာကို ဘာသာပြန်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုလည်း လေးစားတယ်.. နေ့အိပ်မက်လည်း ဒီကဗျာ ကြိုက်ဖူးတယ်.. ဒါပေမဲ့ တစ်ခုလောက်မေးမယ်နော်. (တကယ်မသိလို့ မေးတာနော်.. ထောက်တာ ရွဲ့တာ ရိတာမဟုတ်ပါ၊ တကယ်ကြီးကို သိချင်လို့ပါ) ဘာနည်းနဲ့ ကာရန်ယူထားတာလဲဟင်.. နေ့အိပ်မက် အင်္ဂလိပ်ကဗျာသိပ်မဖတ်ဖူးတော့ နားမလည်လို့ မေးတာ.. စာတစ်ပိုဒ်မှာ ဒုတိယနဲ့ စတုတ္ထအကြောင်းက ကာရန်တူတယ်၊ နောက်တစ်ပိုဒ်ကျတော့ ပထမနဲ့ တတိယ၊ နောက်တစ်ပိုဒ်ကျ တတိယနဲ့ စတုတ္ထ၊ နောက်တချို့အပိုဒ်တွေကျတော့ အပေါ်ကြောင်းရဲ့နောက်ဆုံးစာလုံးနဲ့ အောက်ကြောင်းရဲ့ ဒုတိယစာလုံး..... ဒါပေမဲ့ အပိုဒ်တိုင်းမဟုတ်ပြန်ဘူး... ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်... (မဖြေပေးခင် ကြိုတင်သွားတာ.. :) )
ဆရာတော်ကြီး ကဗျာမှာကတည်းကိုက ကာရန်မိပြီးသားပါဗျာ။ နေ့အိမ်မက် မျက်စိမှောက်သွားလို့ နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကို ကျွန်တော်ကလည်း ဆရာတော်ကြီးခြေရာအတိုင်း လိုက်နင်းလိုက်ရုံပါ။
အင်းပြောရရင်တော့ ကဗျာနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကျွန်တော်မှာ အရည်အချင်းမရှိဘူးဗျ။ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ရေးစပ်ရမယ်ဆိုတာကို နားမလည်ရိုးအမှန်ပါ။ စပ်လိုက်ရင်လည်း ကဗျာမပီ စာမပီတွေပဲ။ ဒါကြောင့် ကဗျာမစပ်ပဲ စပ်ပြီးသားကဗျာတွေကိုသာ လိုက်ခံစားတာပါ။
ပြီးတော့ ကျွန်တော်အားသန်တဲ့ ဘာသာပြန်မှု အတတ်နဲ့ အစားပြန်ထိုးတာလောက်ပဲ လုပ်နိုင်တာပါ။ ကဗျာစပ်တဲ့သူတွေကို လေးစားပါတယ်ဗျာ။ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်ဘာသာပြန်တာ မူရင်းကဗျာစပ်သူ၊ မူရင်းရေးသားသူရဲ့ အာဘော်၊ ပေးချင်တဲ့ ဆုံးမစကား၊ ဆိုလိုရင်းပျောက်သွားမှာစိုးလို့ အနုစိပ် စဉ်းစားပြီး ဘာသာပြန်ဖို့ကြိုးစားတာလောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါကလည်း ကျွန်တော်ရဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်လောက်က ဘာသာပြန်ခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေအရ လုပ်နိုင်တာပါ။
တကယ်တော့ ကျွန်တော် ဘာမှ သိပ်မသိပါဘူးခင်ဗျာ။
အင်အစု attached to
စခန်း too far
မည့်လမ်း be wise
မျှော်စမ်း to keep
နောင်အသစ် try to get
လယ်တီဆရာတော်တို့ခေတ်က ကာရန်မမိတဲ့ ကဗျာများရှိခဲ့လို့ နေ့အိပ်မက်ကို မျက်စိမှောက်သွားတယ်ထင်တာလားဟင်.. ဒီကဗျာက တေးထပ်နည်းနဲ့ ကာရန်ယူထားတယ်ဆိုတာ မြန်မာစာသင်ဖူးတဲ့သူတိုင်း သိပါတယ်ရှင်။
ဟောဗျာ... ဟုတ်တယ်..ဒါကြောင့် ကျွန်တော် တော်တော်မသိတာလို့ ပြောတာ နေ့အိမ်မက်ရေ..အဟီး။